यीनै हुन अमेरिकामा अ’न्धा’धु’न्ध गो’ली प्र’हा’रमा ज्या’न गुमाएका २७ वर्षीय सागर घिमिरे ! – Dainiki Online
यीनै हुन अमेरिकामा अ’न्धा’धु’न्ध गो’ली प्र’हा’रमा ज्या’न गुमाएका २७ वर्षीय सागर घिमिरे !
राष्टिय समाचार समाज स्वास्थ्य
10/05/2021 10/05/2021 adminLeaveaComment on यीनै हुन अमेरिकामा अ’न्धा’धु’न्ध गो’ली प्र’हा’रमा ज्या’न गुमाएका २७ वर्षीय सागर घिमिरे !
संयुक्त राज्य अमेरिकामा भए’को आ’गजनी र गो’ली’का’ण्ड’को घ’टना’मा एक जना नेपाली’ले ज्या’न गु’मा’ए’मा छ’न्।शनिबार बिहान मेरिल्यान्डको बाल्टिमोरमा एक व्यक्ति’ले घर’मा आ’ग’ज’नी ग’री गो ‘ली च’लाउँ’दा एक ने’पालीसहित चार जना’को मृ’ त्यु भए’को हो।उक्त घ’टना’मा ‘परी ज्या’न गु’मा’उने’मा संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका-६ का अन्दाजी २७ वर्षीय सागर घिमिरे छन्।सागरको मृ’त्यु भए’को उनका ठूला बुवा खड्गबहादुर घिमिरेले पु’ष्टी ग’रे।
समाचार संस्था एपीका अनुसार घरमा आ’ग’जनी ग’र्ने र गो’ली’बा’री ग’र्ने व्य’क्ति प’नि मा’रि’इस’के’का छ’न्। बाल्टिमोर प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिअ’नुसार गो’ ली हा’न्ने व्य’क्ति ५६ व’र्षीय एभर्टन ब्राउन हु’न्। उनी सोही ठाउँमा बस्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आ’ग’ज’नी र गो’ली कि’न चले’को हो भ’न्ने खु’लिसके’को छै’न।चार जना प्रहरीले ए’भ’र्ट’न’माथि गो’ली च’ला’ए’र मा’रे’को ए’पीले जनाए’को छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको भिडिओमा एक घरमा आ’ग’लागी भइरहेको देखिन्छ। आ’गला’गी भएकै घरछेउमा सा’गर र सर्लाही’का श्याम अधिकारी बस्थे।‘एकैछिन अगाडि मलाई मेरो भाइले छो’रो बिते’को ख’बर सुना’ए,’ घिमिरेले भने,’ अमेरिकी सरकारले नै छात्रवृत्तिमा पढाएको थियो। भर्खरै पढाइ सकाएको मात्रै थियो। जागिर मिलाउँदै थियो। यस्तो भइहाल्यो।’
घिमिरे चार वर्षअगाडि अमेरिका गएका थिए। उनले क्लाफिन युनिभर्सिटीबाट केही समयअघिमात्रै स्नातक सकाएका थिए।‘उनका दाजु अ’श’क्त छन्। अरू दाजुभाइ छैनन्, हाम्रो परिवार कु’ल’को ब’त्ती थि’यो उतै अमेरि’का’मा नि’भ्यो,’ ठूलो बुवा घिमिरेले भने।‘उनका दाजु अ’श’क्त छ’न्। अरू दाजुभाइ छैनन्, हाम्रो परिवार कुल’को बत्ती थियो उतै अमेरिकामा नि’भ्यो,’ ठूलो बुवा घिमिरेले भने।सागरकी आमा पनि केही समय अघि नै बितिसकेकी थिइन्। आमा’को मु’टु रोग’का कारण नि’धन भएको ठूला बुवाका छोरा कुमार घिमिरेले जानकारी दिए।सागर सानै उमेरदेखि कुमारसँग काठमाडौंमा आएर पढेका थिए।कुमारले पनि आइतबार बिहानमात्रै आफ्ना भाइ बि’ते’को ख’बर पाए’को जानकारी दिए।
‘मैले बिहानमात्रै खबर पाए। भर्खरै सागरसँगै बस्ने रूममेट भाइसँग पनि कुरा गरेर के भएको हो भन्ने बुझेँ,’ कुमारले भने,’ ती भाइको चाहिँ खु’ट्टामा चो’ट लागेर बाँचेछन्।’शनिबार बिहान सुतिरहेको बेलामा एक्का’सी ठू’ला ठू’ला आवाज आउन थालेपछि श्याम ब्युँझिएका थिए। सुरूमा आफूले भु’इँचा’लो आएको ठानेको उनले कुमारलाई बताएका छन्।श्यामले आफ्नै कोठामा सुतिरहेका सागरलाई उठाए र बाहिर भागे।’ए’उटा अ’श्वे’त पु’रुष’ले आफ्नै घर’मा आ’गो लगा’ए’का र’हेछन्। त्योसँगैको घरमा नेपालीको घर छ। जहाँ हाम्रा भाइहरू बसिरहेका थिए,’ श्याम’ले आफू’लाई भनेको कुरा उदृत गर्दै कुमारले भने,’बिहान एक्का’सी आ’वा’जहरू आएपछि श्यामले सागरलाई भु’इँ’चालो आ’यो भनेर उठायो। तल गएर हेर्दा भु’इँ’चा’लो नभई आगलागी भइरहेको रहेछ।’
बाहिर घरमा आ’गो ला’गिरहेको उनीहरूले देखेपछि दुबै जना घर’बेटीलाई उठाउन र आफ्ना सामान लिन घरभित्रै पसेको कुमारले बताए। ‘आ’गला’गी भएको थाहा पाएपछि उनीहरू दुबै जना घर’बे’टी’लाई ब’चा’उन भनेर माथि गएर बोलाउन गएछन्। आफ्ना डकुमेन्टहरू पनि लिएर सबै तल झरे। के छुटेछ क्यारे श्याम भाइ माथि गएछ। तल झर्दा सागर ल’डि’रहे’का दे’खे’छन्। उनलाई उठाउन खोजेछन्। काखमा लिँ’दा सा’स चलिरहे’को थियो रे फे’रि त्यो मा’न्छे आ’ए’र श्याम’लाई गो’ ली हा’ने’छ’न्। उस’को खुट्टा’मा लाग्यो।’
श्याम अहिले अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनको खुट्टा’को भो’लि अ’परेश’न गर्न लागेको कुमारले जानकारी दिए। ‘श्याम’लाई भाइ बि’ते’को था’हा र’हेनछ। उसले प्रहरी’लाई सोध्दा अर्को अस्पताल’मा छ भ’नेछन्। ऊ अहिले पनि सागर खोज्दै छु भन्दैछ,’कुमारले भने,’ धेरै राम्रो पढ्ने भाइ थियो। छात्रवृत्तीमा आइटी पढेर भर्खरै ग्र्याजुएट भएको थियो। सानैदेखि मसँगै बसेको थियो।’घ’टनाप’छि क्यालिफोर्निया’बाट काकाहरू बाल्टिमोर जाँदै गरेको कुमारले बताए। उनको श’व नेपाल ल्या’उने कि उतै दा’ह’संस्का’र गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए। सेतोपाटी बाट साभार
प्रधानमन्त्री ओलीको भविश्य अब राष्ट्रपतिको हातमा, यसरी पुन आउनसक्छन् पदमा
भर्खरै बिहे गरेकी करिष्मा कति सपना थिए होलान् सजाएका, च’ट्या’ङ मा परी सधैंका लागि अस्ता’इन यो दुनियाँ बाट !
कोरोनाले संघीय संसद्‍ सचिवालयका उपसचिवको मृत्यु